यस्तो शैलीमा सेक्स गर्नुहोस्, महिलाले मान्छन् औधी आनन्द ! - Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता	 २०७५ आश्विन १ १५:३९ 7
एजेन्सी । हामी सबैलाई थाहा छ , मानिसै पिच्छे फरक किसिमको यौन सम्पर्क शैली मन पर्न सक्छ । यो स्वभाविक पनि हो । कुन मानिसले कस्तो शैलीको यौन आनन्द लिन्छ यो कुरा भन्न गाह्रो छ ।
तर, हालै एक सर्भेक्षणले रोचक कुरा बाहिर ल्याएको छ । केही दिनअघि एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको थियो । जुन सर्भेक्षणका क्रममा महिलालाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ ? कस्तो खालको संसर्गको शैली मन पर्दछ ? अनि सेक्समा के कुराले मूड अन गरिदिन्छ ? भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बजन बढेर हैरान पार्यो ? यी १० चीज खानुहोस्, हुनेछ पूरै स्लिम